शनिबार सम्पन्न भर्चुअल बोर्ड बैठकले ग्रेडिङको त्रुटि सच्यायाे ? राजवंशी बी ग्रेडमा — Imandarmedia.com
शनिबार सम्पन्न भर्चुअल बोर्ड बैठकले ग्रेडिङको त्रुटि सच्यायाे ? राजवंशी बी ग्रेडमा
काठमाडौँँ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले खेलाडीहरुको ग्रेडिङ (बर्गीकरण) मा भएको त्रुटि सच्याएको छ । क्यानले गते असोजमा पुरुष र महिला क्रिकेट खेलाडीहरुको बर्गीकरण गरेको थियो । तर ग्रेडिङ त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै क्रिकेट खेलाडी संघले असन्तुष्टि जनायो भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
क्यानको शनिबार सम्पन्न भर्चुअल बोर्ड बैठकले ग्रेडिङको त्रुटि सच्याएको छ, सोमपाल कामीलाई बीबाट ए, अविनाश बोहोरालाई सीबाट बीमा बढुवा गरेको छ भने ललितनारायण राजवंशीलाई बी र सन्दीप जोरालाई सी ग्रेडमा राखिएको छ ।
जबकी असोजमा भएको ग्रेडिङमा ललित र सन्दीप दुबैलाई समावेश गरिएको थिएन, महिलातर्फ सरस्वती चौधरीलाई बी तथा ममता चौधरी र सुमन खतिवडालाई सी ग्रेडमा राख्ने निर्णय भएको क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय टिमबाट तीनै जना असोजमा भएको बर्गीकरणमा नपरेका कारण क्यानको केन्द्रीय सम्झौतामा परेका थिएनन् । जबकी राष्ट्रिय टिमबाट खेल्दै नलेखेको केही क्रिकेटरलाई बी र सी ग्रेडमा राख्ने निर्णय भएको थियो ।
जसका कारण पहिलो पटक भएको महिला क्रिकेटरहरुको ग्रेडिङ पनि विवादित बनेको थियो । क्यानले अहिले ग्रेडिङमा परिसकेकाहरुलाई चलाएको छैन तर यसअघि छुटेका तीनलाई बर्गीकरणमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
परिमार्जित वर्गीकरण अनुसार पुरुषतर्फ २० र महिलातर्फ २२ खेलाडीलाई केन्द्रीय सम्झौतामा परे । पुरुषतर्फ ए ग्रेडमा परेका खेलाडीले ५० हजार, ‘बी’ले ४० हजार र ‘सी’ले मासिक ३० हजार तलब पाउने छन् । महिलातर्फ ‘ए’ ग्रेडमा परेकाले १५ हजार, ‘बी’ ले १२ र सी मा परेकाले मासिक १० हजार पाउने छन् ।
कोरोना महामारीका कारण खेलाडीहरुको यो सम्झौता २०२० जनवरीदेखि ६ महिनाको मात्र हुने क्यानले बताएको छ ।केन्द्रीय सम्झौतामा परेका खेलाडीहरु
ए ग्रेड) पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेषवाकर, बसन्त रेग्मी,दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सन्दीप लामिछाने, करण केसी, विनोद भण्डारी, सोमपाल कामी,
बी ग्रेड) सुसन भारी, आरिफ शेख, पवन सर्राफ, अविनास बोहरा
सी श्रेणी) सुवास खकुरेल, रोहित पौडेल, कुशल मल्ल, रसिद खान, कमल सिंह ऐरी, ललित राजवंशी, सन्दीप जोहरा
ए ग्रेड) रुबिना क्षेत्रि, नेरी थापा, इन्दु बर्मा,सिता राना मगर, करुणा भण्डारी
बी ग्रेड) ज्योति पाण्डे, अप्सरी बेगम,रोमा थापा, बिन्दु रावल, कविता जोशी, ऋतु कजौनिया,काजल श्रेष्ठ, सरिता मगर, सरस्वती चौधरी
सी ग्रेड: कविता कुँवर,डोली भट्ट,अनुराधा चौधरी, सोनु खड्का,अञ्जली चन्द, सोभा आले, सुमन खतिवडा, ममता चौधरी
महिला राष्ट्रिय फुटबल लिग माघ पहिलो सातादेखि सञ्चालन
राष्ट्रिय प्रतियोगिताको लागि प्रदेश १ ले गर्याे प्रारम्भिक टोली घोषणा
म्यानचेस्टर सिटीले गर्यो चेल्सीमाथि शानदार जित दर्ता
लुम्बिनीलाई १० विकेटले पराजित गर्दै प्रदेश १ फाइनल
सन्दीप लामिछानेले बिगबासमा शनिबार पहिलो खेल स्टार्सविरुद्ध खेल्ने
फुटबल खेलाडी विक्रम र विमलको उपचार कतारमा हुने
६४४औं गोल गर्दै मेसीले तोडे पेलेको कीर्तिमान